Ny fampatsiahivana dia zava-baovao ao amin'ny Google Kalandrie | Androidsis
Google dia mampahatsiahy ny Google Kalandrie
Tsy gaga mihitsy izahay fa Google sy ny hafa, toa ny Facebook, dia mampiditra endri-javatra hita amin'ny fampiharana sy serivisy hafa manolotra kalitao avo kokoa ho an'ny vokariny. Omaly fotsiny izahay dia naneho hevitra momba ny iray amin'ireo Milalao Vaovao Facebook hampifangaro ny streaming amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny tambajotran-tseraserany, fampiasa iray izay mindrana avy any Periscope hahafahan'ny mpampiasa azy manararaotra azy io fa tsy mila miala amin'ny rindrambaiko manokana. Izy io dia lalao iray ananan'ny mpilalao lehibe indrindra amin'ity ligy lehibe ity ankehitriny, izay fampiharana sy karazana serivisy rehetra amin'ny endrika fandefasana hafatra an-tserasera, tambajotra sosialy ary repertoire hafa.
Voafintina ao amin'ilay vaovao izay ho avy tsy ho ela ao amin'ny Google Calendar ary tsy inona izany fa ny manampy fanampiana ny fampahatsiahivana ho an'ny rindranasan'izy ireo amin'ny kalandrie, amin'izay hahafantaran'ny mpampiasa ny lisitry ny zavatra tokony hataony sy ireo hetsika ho avy, avy amin'ny toerana na toerana iray ihany. Ny tena mahagaga antsika dia ity tsy fahita firy ity, izay iray amin'ireo antony mahatonga ny Todoist lehibe, mbola tsy teo alohan'ny kalandrie Google. Araka ny fitenenana, tsara kokoa tara noho ny tsy misy ary izao dia ho entin'i Google eto amintsika araka ny nambarany tamin'ny iray amin'ireo bilaoginy.
1 Avy amin'ny fampiharana isan-karazany
2 Ireo fampiharana dia mitanisa ireo voina rehetra
Avy amin'ny fampiharana isan-karazany
Ny fampahatsiahivana dia efa afaka ampiana amin'ny fampiharana malaza isan-karazany toy ny Inbox sy Google Now. Ireo fampahatsiahivana ireo hiseho ao amin'ny Google Calendar izao lisitry ny zavatra tokony hatao raha afaka miantso olona ianao na mijanona eo amin'ny tobin-tsolika hividy chips. Miseho amin'ny kalandrien'ireo mpampiasa izy ireo izao, mikorisa amin'ny fomba mety hitranga amin'ny rindranasa hafa, miandry ho vita, noho izany dia hitranga ny ampitso raha mbola tsy vita.
Ka ny ampitson'ny namoronana azy dia ity fampahatsiahivana ity hitohy amin'ny fomba mitovy mandra-pahavitan'ny mpampiasa azy. Toy ny amin'ny lisitry ny lisitry ny raha-hatao hafa, dia afaka manamboatra swasp ho an'ny sasany amin'ireo asa efa vita ao amin'ilay lisitra ihany isika, izay mahatonga azy io ho fampiasa lehibe izay ho hita ao amin'ny Google Calendar mandritra ny andro.
Araka ny nolazaiko, ireo fampahatsiahivana ireo dia azo noforonina avy amin'ny serivisy Google hafa toa ny Google Now, Keep na Inbox. Raha vao voatahiry dia hiseho ao amin'ny Google Kalandrie hahafahantsika miditra amin'ny zava-drehetra nataontsika. Amin'izany fomba izany, Google dia mamela ny mpampiasa ampiasao ny kalandrie ho ivon-toerana afovoany ho an'ity karazana fampiasa ity.
Ireo fampiharana dia mitanisa ireo voina rehetra
Efa fantatsika ny fisian'ny fampiharana marobe izay mandeha tsara ary anisan'ny mampiavaka azy indrindra ny lisitra tokony hatao. Todoist dia iray amin'ireo fampiharana izay mahafantatra ny fomba hanaovana azy tsara sy izany hahita ny Google Calendar ho mpifaninana aminy mikapoka. Na dia tsy iray amin'ireo toetrany lehibe indrindra aza izy io, ny famoronana fampahatsiahivana dia ny axis ivon'ny asany, na dia amin'ny fomba mandroso kokoa aza izy io miaraka amin'ny tag, ny laharam-pahamehana ary ny lisitry ny toetra mampiavaka azy tsara indrindra amin'ny fitantanana ny asa sy lisitra tokony hatao.
Ankoatra ny Inbox sy Google Now, mitazona dia tena tsara ity endri-javatra vaovao ity avy amin'ny Kalandrie, satria izao isika dia afaka mampiasa ity app ity hamoronana karazan-tsoratra rehetra hanatonana mivantana ny kalandrie. Miaraka amin'ny Widget tsotra toa Month, azontsika atao daholo ireo lisitra ireo raha atao amin'ny birao finday.
Toy ny nolazaiko ihany, handeha ity fampiasa vaovao ity miseho afaka andro vitsivitsy, raha tsy izany dia efa vita ary azonao omena azy. Efa fantatray ny fomba itondran'ny Google azy ireo amin'ny fizarana. Faharetana kely ary afaka mamonjy ny tenanao amin'ny fametrahana fampiharana fanampiny azonao soloina amin'ny fampahatsiahivana amin'ny kalandrie ianao izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google dia mampahatsiahy ny Google Kalandrie
Ny fampiharana Adobe Lightroom Mobile dia lasa maimaimpoana amin'ny kinova 1.4
Sniper Fury dia mametraka anao eo alohan'ny fahitana teloscopika mba hamongorana tsirairay ny fahavalo